Akhriso: Qormo Caafimaad Oo Muhiim U Ah Qof Kasta Oo Sooman.
Monday May 28, 2018 - 11:36:39 in Wararka by Super Admin
Waxaa aad u badan cunnooyin iyo cabitaanno ay dadku aad u jecelyihiin, una heystaan iney caafimaad iyo vitamins dheeri ah laga helo, balse markii la baaray ay soo baxday xaqiiq taa ka duwan, iska daaye in caafimaad laga helo waxay kusoo jiidayaan cu
Waxaa aad u badan cunnooyin iyo cabitaanno ay dadku aad u jecelyihiin, una heystaan iney caafimaad iyo vitamins dheeri ah laga helo, balse markii la baaray ay soo baxday xaqiiq taa ka duwan, iska daaye in caafimaad laga helo waxay kusoo jiidayaan cuduro qaarkood dilaa ah.
Arrinta la yaabka leh waxay tahay in cunnooyinkan iyo cabitaannadan qaar ay dadku soo jumleystaan, guryahana soo dhigtaan, iyadoo saqiir iyo kabiirba u isticmaalaya si xad dhaaf ah.
Baradhada sajalka ah ee ay dadku ugu yeeraan Jibsiga waxay kamid tahay khudradaha ay dadku isticmaalaan, waxaana khubaro caafimaad ay sheegayaan iney kamid tahay khudradaha kordhiya miisaanka iyo culeeska qofka.
Sida qof welibana uu ka dheregsanyahay cayilka waxaa ku lamaanan kuna hoos duugaan cuduro badan, waxaana adag in jirka qofku si dheelitran u shaqeeyo haddii uu cayilkiisi siyaado yahay.
Cabitaannada laga digayo, islamarkaana dhakhaatiirtu sheegayaan iney keenayaan caafimaad darro waxaa kamid ah cabitaannada sajalka ee dibadda noocyadooda kala duwan.
Waxay cilmi baariyaal dhanka caafimaadka u dhuun daloola sheegayaan in cabitaannada sajalka ah ay kubadantahay sokorta iyo maado kale oo dhadhan gaar ah u sameysa, si ay dadku u jeclaadaan.
Cuntooyinkan iyo cabitaannadan laga deryinayo in si xad dhaaf ah loo isticmaalo, islamarkaana dhalinkara caafimaad darro waxaa la yaab leh in suuq geyn ballaaran loo sameeyo, waxaad arkeysaa tusaale qofka iibinaya cabitaannada sajalka inuu amaanayo, isagoo sheegaya in laga helayo vitamins iyo fawaa’id badan.
Hay’adda caafimaadka ee wadanka Ingiriiska ayaa dhawaan baahisay warbixin dheer oo ay uga hadleyso in cunnooyinka sajalka ah ay sabab u noqdeen kororka ku yimid cudurada ku dhaca maskaxda.
Diraasadda ay sameysay hay’adan, islamarkaana ay baahiyeen warbaahinta ayaa lagu sheegay in 50-kii sano ee lasoo dhaafay cuntooyinka sajalka ah ee ay warshaduhu soo saarayeen ay kordhiyeen xanuunada dhimirka ee dadka ku dhaca.
Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Ingiriiska ayaa sanad kasta miisaaniyad lacageed oo gaareysa 100 billion oo lacagta Genyga ku bixisa la tacaalida dadka dhimir ahaan u xanuunsan, waxaana diraasadu ay soo jeedisay in taa bedelkeeda ay wanaagsantahay in dowladdu ay xooga saarto ilaalinta cuntooyinka.
Bitzaha iyo Yaanya shiishiidda ayaa kamid ah kuwa sidoo kale laga deryinayo, waxaana Yaanyo-shiishiidda ku badan maadada loo yaqaano Sodiumka iyo sokorta oo loogu talaglaay iney wanaajiyaan dhadhanka.
Cabitaannada sajalka inkastoo si guud ay wanaagsantahay in la iska yareeyo, hadana marka lagu guda jiro bisha Ramadaan waxaa haboon in gebi ahaanba la iska dhaafo, waxaana wanaagsan in dadku ay ku afuraan biyaha madow ee caadiga ah, cabitaan ahaana ay u isticmaalaan khudaarta noocyadooda kala duwan ee ay ku shiitaan guryahooda.
Haweenka Uurka leh ma soomi karaan?!!
Ugu dambeyn drs lagu magacaabo Cizza Al-badawi oo ku takhasustey cudurada haweenka ayaa sheegeysa in haweenka muslimkaatka ee uurka leh islamarkaana awoda iney sooman ay haboontahay iney gutaan waajibkaas, balse ay wanaagsantahay kahor inta aysan soomin in xaaladooda caafimaad ay qiimeeyaan.
Tusaale haddii uurku yahay mid cusub, gabadhuna ay marar badan mantagto maalintii waxaa haboon iney iska dhaafto soonka, rukhsada Rabbina ay qaadato.
Haddii ay soomeyso haweeneyda waxaa la gudboon iney si wanaagsan u isticmaasho khudaarta kala duwan, caanaha iyo waxyaabaha vitaminaatka laga helo, waana iney yareysaa isticmaalka Shaaha iyo Qaxwada kuwaas oo leh kaadi badan.
Haweeneyda Uurka leh iyadoo sooman haddii ay iska dareento isbedel iyo xanuuno waxaa haboon in si deg deg ah isaga furto soonka, sharciyana sida Culimada diinta Islaamku sheegaan haddii haweeneyda Uurka leh iyo hooyada ilmo nuujineysa ay awoodi weyso iney soonto iyadoo u baqeysa Nafteeda ama ilmaheeda, waxaa u banaan iney iska afurto, haba ku kala duwanaadeen culimada qaabka loo soo gudayo iyo fidiyada la dhiibayo.